पत्रकार महासंघ निर्वाचन: तटस्थ विचार, खुलस्त व्यवहार, महासंघ नेतृत्वमा व्यावसायिक पत्रकार | चितवन पोष्ट दैनिक
पत्रकार महासंघ निर्वाचन: तटस्थ विचार, खुलस्त व्यवहार, महासंघ नेतृत्वमा व्यावसायिक पत्रकार
२०७० फाल्गुन २१, बुधबार ०१:३७ गते
एउटा बहस यतिबेला चलिरहेको छ । मानिस राजनीतिबाट निरपेक्ष हुन सक्छ वा सक्दैन ? अझ मानिसभन्दा पनि उसले अवलम्बन गरेको व्यवसाय राजनीतिक रुपमा निरपेक्ष हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने । नेपाली पत्रकारहरुमाझ यतिबेला चुनावी माहोल तातिरहेको अवस्थामा पत्रकारितालाई राजनीतिसँग निरपेक्ष राखी व्यावसायिकतासँग सापेक्षता राख्न खोज्नेहरु अगाडि आइरहेका छन् ।
नेपाली पत्रकारिताको इतिहास मिसन पत्रकारिताबाट सुरू भएको हो । तर, अहिले एउटा अहम् प्रश्न यहीँनेर उब्जिएको छ, ‘नेपाली पत्रकारिता सधैँभरि मिसन पत्रकारितामा नै अल्झिने कि व्यावसायिक पनि बन्दै जाने ?’ अहिलेसम्म नेपाली पत्रकारितामा अभ्यास भइरहेको पत्रकारिताको विकृति भनेको ‘दाइ पत्रकारिता’ र ‘कामरेड पत्रकारिता’ हो । यसबाट नेपाली पत्रकारिताले उन्मुक्ति पाउने कि नपाउने ? सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । युग परिवर्तनमुखी छ । हिजोको अवस्था आज छैन, तर हाम्रो अभ्यासमा भने युगअनुरुपको परिवर्तन देखिएन ।
प्रजातान्त्रिक विचारधारासँग नजिक रहेका पत्रकारहरुले आफ्नो विचारलाई पत्रकारितामा ढाल्दै गर्दा यथार्थलाई हामीले छिपाइरहेका त छैनौँ ? वामपन्थी विचारधारानिकट पत्रकारहरुले आफ्नो वाम विचारलाई समाचारमा ढाल्दै गर्दा हामी यथार्थबाट टाढा त भागिरहेका छैनौँ ?’ सोच्नुपर्ने बेला भएको छ । हामीले लेख्ने समाचारमा दाइले यसो भने, कामरेडले उसो भने भनेर आउँदै गर्दा के दाइले र कामरेडले भनेको कुरा सही हो कि होइन भनेर जाँच्न सक्यौँ कि सकेनौँ ? अहिले हामी चुक्दै आएको ठाउँ भनेको यही हो । हामीले समाचार लेख्दै गर्दा आफू कुन विचारधारा बोकेको पत्रकार हो भनेर आफ्नो परिचय दिइरहेका छौँ । अहिलेसम्म कसैले छातीमा हात राखेर भन्न सक्ने अवस्था छैन कि ‘मैले ‘दाइ पत्रकारिता’ र ‘कामरेड पत्रकारिता’ गरेको छैन ।’
नेपाल पत्रकार महासंघमा सही र व्यावसायिक पत्रकारहरुको नेतृत्व आउनु पर्ने आवाज आमरुपमा उठ्न थालेको छ । श्रमजीवी पत्रकारहरु श्रमको मूल्य खोजिरहेको अवस्था छ । यही अवस्थामा चितवन पत्रकार महासंघको अधिवेशन हुँदैछ । आज हुने अधिवेशनले व्यावसायिक पत्रकारहरुलाई विजयी गराउनुपर्छ । यो अधिवेशनमा श्रमजीवीको नेतृत्व स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । श्रमजीवीहरुको नेतृत्वमा महासंघ अगाडि आउनुपर्छ ।
श्रमजीवीहरुको सुरक्षाको प्रश्न उठिरहँदा अर्को प्रश्न पनि उठिरहेको छ, महासंघको नेतृत्वमा श्रमजीवीको नेतृत्व सुरक्षित कि मिडिया सञ्चालकहरुलाई अगाडि ल्याउने ? महासंघको नेतृत्वमा निर्वाचनमा राजनीतिको गन्धलाई प्रश्रय दिने कि व्यावसायिकतालाई अगाडि ल्याउने ?
दुई वर्षसम्म नसुनिएका, कहीँकतै नदेखिएका अनुहारहरु, नपढिएका र नसुनिएका स्वरहरु पछिल्लो वर्षमा राजनीतिका नाममा महासंघको मतदाता बन्ने परम्परा विकसित भइरहेको अवस्थामा पत्रकार महासंघलाई शुद्धीकरण गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । अहिलेको चितवनको पत्रकारिताको अवस्थाले पनि यही सिर्जना गरेको छ । महासंघको नयाँ नेतृत्वका लागि राजनीतिक दलहरुमा देखिएको जुँगाको लडाइँले पनि त्यही देखाएको छ । महासंघको नेतृत्वमा आउनका लागि राजनीतिक दलका तलदेखि माथिसम्मका नेताको सोर्सफोर्स लगाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना हुनु व्यावसायिक पत्रकारहरुका लागि पाच्य कुरा होइन ।
चितवन पत्रकार महासंघको नेतृत्वका लागि व्यावसायिक पत्रकारहरुका तर्फबाट एउटा प्यानल खडा हुँदा राजनीतिक दलहरुका तर्फबाट अर्को प्यानल देखा परेको छ । अझ भनौँ, राजनीतिक दलहरु समर्थक र शुभचिन्तक पत्रकारका संस्थाहरु महासंघमा पदहरुको भागबन्डामा समय खर्चिएका छन् । हामीले व्यावसायिक पत्रकारिताको वकालत गरिरहँदा राजनीतिको रङलाई मिसाइरहेका छौँ । मानिस राजनीतिबाट निरपेक्ष हुन सक्दैन तर पनि हामी व्यावसायिक पत्रकार हौँ, हाम्रो राजनीतिक आस्थालाई व्यावसायिक पत्रकारितामा भित्राउँदा हाम्रो व्यावसायिकता कोमामा पुगेको छ । हामीले हाम्रो व्यावसायिकतालाई ब्युँत्याउनु पर्छ ।
व्यावसायिक पत्रकारहरुको नेतृत्व अहिले चितवन महासंघका उपाध्यक्ष रमेशकुमार पौडेलले गरिरहेका छन् । त्यस्तै अर्कातर्फ देखिएका छन्, नेकपा एमालेनिकट पत्रकारहरुको संगठन प्रेस चौतारीका हरि पोखरेललगायत । व्यावसायिक पत्रकारहरुको खेमा चाहन्थ्यो, व्यावसायिक र क्रियाशील पत्रकारहरुको सामूहिक नेतृत्व होस्, राजनीतिक खिचातानी नहोस् तर त्यस्तो हुन सकेन । अहिलेको नेतृत्व छनोट प्रक्रियाले एक पटक छरिएर रहेका व्यावसायिक र क्रियाशील पत्रकारहरुलाई एक बनाएको छ । यसले एउटा सन्देश दिएको छ । अहिलेको यो गठनले कस्तो उपलब्धि देला, त्यो भोलि देखिएला । तर, अहिलेको यो अवस्थाले आगामी तीन वर्षपछिको पत्रकार महासंघको भविष्यलाई परिलक्षित गरेको छ ।
महासंघको नेतृत्वमा जबसम्म मिडियाका मालिकहरु आउँछन् र रहन्छन्, त्यो बेलासम्म श्रमजीवीहरुको माग र आवाज सुनिने कुरामा द्विविधा देखिन्छ । यही निर्वाचनका बेला नयाँ सदस्यता पाएका र नवीकरण गरेकामध्ये कति जना सक्रिय रहेका छन् र रहनेछन्, त्यो देखिएला तर अहिलेसम्म महासंघलाई आफ्नो विरासतका रुपमा खडा गर्ने गलत अभीष्टले महासंघमा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्ने अवस्था र क्रियाशील पत्रकारहरुले सदस्य नपाउने अवस्था सिर्जना हुनु भनेको दुर्भाग्य नै हो । यसलाई चिर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।
अहिले महासंघको निर्वाचन हेर्दा लाग्दैछ, यो पत्रकार नभएर राजनीतिक सरकार बनाउनका लागि गरिएको निर्वाचन हो, जसले आफ्नो सत्ता स्थापित गर्न खोजिरहेका छन् । पत्रकारको नाममा पत्रकारिताको मूल्य र मान्यतालाई समेत धज्जी उडाउनेहरुको उपस्थितिलाई नकार्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको छ । पत्रकारहरुको हकहितको सुरक्षाका लागि व्यावसायिक, स्वतन्त्र र श्रमजीवी पत्रकारहरुको जित आवश्यक रहेको छ । पत्रकारिताको एबीसी सिद्धान्त एक्युरेसी, ब्यालेन्स र क्रेडिबिलिटीलाई आत्मसात् गर्ने पत्रकारहरुको नेतृत्व महासंघले पाउनुपर्छ । राजनीतिक निर्वाचनमा पत्रकारहरुले आफ्नो परिचय दिन्छन् आफ्नो समाचारले, उनीहरुका समाचार हेर्दा लाग्छ– उनीहरु पत्रकार कम र राजनीतिक दलका कार्यकर्ता बढी हुन् । हो, त्यस्ता पत्रकारहरुलाई पत्रकार महासंघको अधिवेशनले नकार्न सक्नुपर्छ ।
महासंघले पत्रकारहरुको नियन्त्रणसमेत गर्नुपर्ने अवस्था छ । राजनीतिक गुटका लागि गलत व्यक्तिलाई पत्रकारको बिल्ला भिराउने काम हुँदा पत्रकारको नै अपमान हुने अवस्था रोक्नुपर्छ । अब पत्रकार महासंघको नेतृत्वमा आउनेले यहाँका पत्रकारहरुको जीवन जिउने आधारको सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । श्रमजीवी पत्रकारले आफ्नो व्यावसायिक सुरक्षा र सात हजार २०० रूपैयाँको तलबको कुरा नभई समाज सुधारका लागि कलम चलाउनेबारे सोच्न सक्ने वातावरणको निर्माण गर्नुपर्छ, बल्ल मात्र नेपालको पत्रकारिता व्यावसायिक बन्न थालेको भान हुनेछ । यो अधिवेशन यसतर्फ पनि केन्द्रित हुनेछ भन्ने महासंघको एक मतदाताको हैसियतले मेरो अनुरोध हो ।
सम्वृद्ध सञ्चार सुरक्षित पत्रकार
पेसामा सक्रिय आचरणमा इमानदार
तटस्थ विचार खुलस्त व्यवहार
नेतृत्व छान्दा यही बनोस् आधार ।
महासंघको यो अधिवेशनमा यो नाराका साथ अगाडि आएको श्रमजीवी व्यावसायिक पत्रकारहरुको प्यानललाई महासंघको नेतृत्वमा आउनु चुनौतीको पहाड फोड्नुबराबरको चुनौती छ । तर पनि त्यसपछिको चितवनको पत्रकरिता तथा श्रमजीवीको भविष्यलाई हेर्ने हो भने अहिलेको चुनौतीलाई सामना गर्नुको अर्को विकल्प देखिँदैन । नेतृत्वको निर्वाचनमा मतदाताले राजनीतिक आस्थाभन्दा पनि व्यावसायिक र क्रियाशीलतालाई अगाडि ल्याउनु पर्ने आवश्यकता छ । यो अधिवेशनमा महासंघमा प्रतिनिधित्वका लागि क्रियाशील महिला तथा जनजाति पत्रकारहरुले पनि आफ्नो नेतृत्व सुरक्षाको आवाज उठाएका छन्, यसलाई व्यावसायिक प्यानलले पनि समर्थन गरेको छ । व्यावसायिक र क्रियाशील पत्रकारहरुको यो सक्रियता र नेतृत्वले श्रमजीवी पत्रकारहरुको हकहित र पत्रकारहरुको धुमिलिँदै गएको छविलाई उजिल्याउने छन् भन्ने अपेक्षा आमपत्रकारहरुमा देखिन्छ ।
यसपटक महासंघको नेतृत्व मालिकको नभई श्रमजीवीको होस्, राजनीतिक नभई व्यावसायिक पत्रकारको होस् । एक महासंघको शुद्धीकरणको यो अभियान स्वयं पत्रकारहरुबाट थालनी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । सचेत पत्रकारहरुले आफ्नो अधिकारका लागि पनि निर्वाचनलाई राजनीतिक आस्थालाई भन्दा पनि व्यावसायिकतालाई हेर्नेछन् भन्ने अपेक्षा छ । एक पत्रकारले अन्धभक्त नभई नेतृत्वमा मत खसाल्नु आवश्यक छ । ‘हाम्रो होइन, राम्रो व्यक्तिलाई महासंघको नेतृत्वमा ल्याऊँ, महासंघको शुद्धीकरणको थालनी आफैँबाट थालौँ ।’